Maxay yihiin ciidamada Danab ee Mareykanka u tababaray Soomaaliya”Warbixin. | Waxsansheeg News
You are here : Waxsansheeg News » War » Maxay yihiin ciidamada Danab ee Mareykanka u tababaray Soomaaliya”Warbixin.
Maxay yihiin ciidamada Danab ee Mareykanka u tababaray Soomaaliya”Warbixin.
Posted by Nuux Abdi on October 17th, 2020 05:24 AM | War
Waxaa taliye cusub loo magacaabay ciidamada kumaandoosta Danab ee Soomaaliya, ka dib markii xilka laga qaaday talihii hore, Ismaaciil Cabdimaalik.
Taliyaha cusub ee Danab, Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Nuur (Beer yare), wuxuu horay u ahaa taliye ku xigeenka Danab, marna waxa uu horay usoo noqday taliyaha saadka ee ciidamada Danab.
Maxay yihiin ciidamada Danab?
Sida saraakiil dowladda ah laga soo xigtay ay sheegeen, ujeeddada loo sameeyay ciidanka ee xilligaas waxay ahayd in la hirgeliyo ciidan isku dhafan oo kumaandoos ah, waxaana lagu asaasay saldhigga ciidamada cirka ee Belidogle ee degmada Wanlwaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Sida ay BBC Somali u sheegeen saraakiil Danab ka mid ahayd, askeriga ku biiraya ciidanka Danab, waxaa la marsiiyaa baaritaan qoto-dheer oo lagu ogaanayo shakhsiyaddiisa, gaar ahaan in uu horay usoo noqday ciidan, in uu dembi soo galay iyo inkale, in uu mar uun ka mid noqday kooxaha Islaamiyiinta ah, in uu ku lug lahaa xadgudub dhanka xuquuqda aadanaha ah iyo waxyaabo kale oo lagu hubinayo askariga tayadiisa.
Sida ay BBC u sheegeen saraakiil hore uga tirsanayd Danab; saraakiisha hoggaamisa ciidankan ayaa marka hore lagu tababaraa mac-hadka barashada luuqadda ee Defence Language Institute (DLI) ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka, halkaas oo ay ku soo qaataan aqoon durugsan oo dhanka luuqadda ingiriiska ah.
Saraakiil militari hore ah waxay BBC-da u sheegeen in ciidanka dowladda Turkiga ay tababarto ay yihiin kumaandoos lagu magacaabo Gorgor, balse aanay ahayn Danab. Kuwa Mareykanka uu tababaro oo keliya ayaa loogu yeeraa Danab.
Ciidanka Danab waxay si toos ah u hoos tagaan Wasaaradda Gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya, waxayna si gaar ah ula shaqeeyaan ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya.
Hubka ay hesytaan waxaa siiya dowladda Mareykanka, waxaana sidoo kale mushaarkooda bixiya Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka, inkastoo khubaro arrimaha militariga ku xeel dheer oo aan la hadalnay ay aaminsan yihiin in dowladda Federaalka ay wax ku biiriso daryeelkooda.
“Markii aan ka tagayay ciidanka, tirada guud ee askarta waxay aheyd 1,070 balse maanta waxay marayaan 800 oo askari oo tiradoodu way yaraatay, taasina waxaa ugu wacan xasilooni darrida ciidanka ee dhanka hogaanka. Ciidanka hogaankiisa in la siyaasadeeyo ma ahan, sababtoo waxay wiiqeysaa awooddooda iyo korriinka tiradooda,” sidaas waxaa BBC-da u sheegay korneyl Axmed Danab oo soo noqday taliyaha ciidamada Danab.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ciidanka sita magacan laga asaaso Soomaaliya, waxay ahaayeen ciidii kumaandooska ee jiray xilligii dowladii militariga ee Maxamed Siyaad Barre, balse waxay burbureen kaddib markii ay dhacday dowladdii dhexe. Ciidanka ayaa xilligaas lagu magacaabi jiray Danab.
« Sodoh Kawanaagsan Wali Ma Aragatay Mise Ma Maqashayba Sh Yamani Hoos Ka Dhagayso Kana Daawo Xigmada Iyo Nuxurka Qisdanani.
Qofkii ugu da’da weynaa Dunida Lagu eedeyso falal aragagixiso+Dalka Uu ka Soo Jeedo. »